Iibhatyi / iivensi → Izazisi zentengiso • I-P & M yobuchwephesha yobuchwephesha
Iibhatyi zentengiso kunye nevesti ngokuqinisekileyo lukhetho olufanelekileyo lokuwa kunye nexesha lasebusika. Iimpahla esizibonisayo zibukeka zintle kakhulu, kodwa zikwanazo nezinto eziluncedo. Iyasebenza ekukhuseleni izinto zangaphandle ezinje ngumoya nemvula.
Iibhatyi ezingangenisi mvula nezingangeni moya kunye nevesti
Ukusikeka kufanelekile ukuba kunikwe ingqwalaselo enkulu Imvula yaye yomoya, ngenxa yokusebenzisa kwabo iimeko zemozulu zangaphandle ezinzima. Iya kuveliswa iibhatyi nevesti Itekhnoloji yobuchwephesha isetyenziselwe imveliso eya kusebenza iminyaka emininzi ikwimeko entle ngelixa igcina iipropathi zayo.
Uhlobo lweendlela zokuthuthuzela kunye nokhuseleko
Kwethu Ivenkile uya kufumana jackethi yaye kamizelki ngeendlela ezahlukeneyo zabafazi, amadoda, abantwana kunye ne-unisex. Uluhlu olubanzi lobungakanani kunye nemibala ikuvumela ukuba uhlengahlengise iimveliso kwiimfuno zakho kwaye uzichonge ngokwemibala enemibala yenkampani okanye yeklabhu.
Olu khetho luluncedo ngakumbi xa usenza iodolo impahla yokubhengezangakumbi ukuba siyamkhetha ukwenza umntu ngokubulawa ushicilelo lomntu ngamnye.
Bakha iqela elibalulekileyo Iivesti ezibonakalisayo, Ukuphucula ukhuseleko ebaleni nasendleleni. Zikulungele ukuhamba emva kobumnyama, kunye nakwiintsuku ezinamafu ngakumbi.
Esi sibonelelo sikwabandakanya ivesti etyheli, ebonisa abantwana, eya kuthi ngokuqinisekileyo ikhulise ukubonakala kunye nokhuseleko lomntwana endleleni okanye ecaleni kwendlela phakathi kwekhaya nesikolo. Zombini kubantu abadala kunye nabantwana, iivesti ezibonakalisayo ziya kunceda ukunciphisa umngcipheko wengozi enkulu enkosi ngokubonakala okuphuculweyo.
Siyabonelela ibhatyi ebonakalayo ngokubakho kwemikhono kunye ne-hood, ebaluleke kakhulu kumaxesha otshintsho kwaye naphina apho umsebenzi ufuna khona utshintsho kwindalo esingqongileyo nakumaqondo obushushu. Ibhatyi inebhatyi yoboya yangaphakathi efumanekayo, eqinisekisiweyo enemigca eyi-3M, idibana nemigangatho ye-EN ISO Imveliso inokwenziwa ibe yeyomntu, kodwa ngenxa yeepaseji ezininzi kunye neepokotho, indawo yokumakisha inomda, ukufikelela kuphawu lwentengiso ngasemva.
Ushicilelo olwenziwe ngobuhle
Imihlobiso (isambatho sekhompyuter okanye ukushicilelwa kwesikrini) kwiibhatyi nakwiivesti zenziwe ngengqwalaselo yazo zonke iinkcukacha.
Ukuqwalaselwa kumgangatho ophezulu kuthetha ukuba iimpahla ozithengayo ziya kuba yinto yobuchule kwinkampani. Inkampani yethu inepaki yayo yomatshini, esivumela ukuba silawule ngokuchanekileyo inkqubo yokuhombisa kuwo onke amabakala, kwaye ngaloo ndlela sisabele kwangoko kwimeko yemveliso.
Njengokunikezelwa kwemveliso kunye neemfuno zabathengi, sagqiba kwelokuba senze imihombiso sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo, ikakhulu isambatho sekhompyuterkodwa kwakhona ukushicilelwa kwesikrini, Sublimation i ukudluliselwa kobushushu.
Siyakumema ukuba uqikelele ngokukhawuleza kwaye ukhululeke.
iibhatyi ezishushu zomsebenziivesti zomsebenzi wabasetyhiniiimpahla zomsebenzi zamadodaivesti yomsebenzi egqunyiweyo yamadodaivesti yomsebenzi egqunyiweyoivesti yomsebenzi egqunyiweyo yamadodaIivesti zomsebenzi ezibonakalisaivesti zomsebenziUmsebenzi iivenkile AllegroIvesti zasehlotyeni zokusebenzaivesti yomsebenzi egqunyiweyoIivesti zomsebenzi ezibonakalisaUmsebenzi iivenkile olxUmsebenzi usebenza ngeprintIvesti zasebusikaIidyasi zomsebenzi zamadodaIibhatyi ezisebenza ebusika zamadodaiibhatyi zomsebenzi ezifakwe igqunyiweIibhatyi zomsebenzi ezibonakalisaIibhatyi zomsebenzi ezibonakalisayo iAllegroIidyasi zamadoda ezinethayosebenza iingubo zemvulaiibhatyi zomsebenziAllegro iibhatyi zomsebenziiibhatyi ezimhlophe zomsebenziiibhatyi zomsebenzi zabasetyhinikunye neebhatyi zomsebenzi wobungakananiIidyasi zomsebenzi zamadodaIibhatyi zomsebenzi wasebusikaiibhatyi zomsebenzi ezingatshiyoiibhatyi zomsebenzi ezifakwe igqunyiweIibhatyi zomsebenzi ezibonakalisaIibhatyi zomsebenzi zasebusika ezibonakalisayoIibhatyi zomsebenzi olxIibhatyi zomsebenzi ezingangenelwa yimvulaiibhatyi zomsebenzi ezisebenzayoIibhatyi zomsebenzi wasentwasahloboIibhatyi zomsebenzi ezineempapashoIibhatyi zomsebenzi ezinokubonisaIibhatyi zomsebenzi wasebusikaAllegro iibhatyi zomsebenzi wasebusikaiibhatyi zabasetyhini basebusikaIibhatyi zomsebenzi zasebusika ezibonakalisayoIibhatyi zomsebenzi zasebusika ezibonakalisayo iAllegroIibhatyi zomsebenzi wasebusika ezingangeni mvulaIvenkile yasebusika yee jakethi zevenkileIidyasi zasebusika zamadodaUmsebenzi wokubonisa iibhatyi zasebusikasebenza iibhatyi zasebusikaIibhatyi ezibonisa ubusikaiibhatyi zomsebenzi ezikhululekileyoiibhatyi ezinophawu lomsebenzimascot iibhatyi zomsebenzineebhatyi zomsebenzi we-norwayIibhatyi zomsebenzi ezibonakalisaivesti zomsebenziiibhatyi zomsebenzi ezifakwe igqunyiwesebenza iibhatyi zasebusikaUmsebenzi iimpahla zokunxibaIibhatyi zomsebenzi wasebusika
5 / 5 ( 13 iivoti )